स्वार्थले भरिएको मेरो देश - Tulsipur Online
स्वार्थले भरिएको मेरो देश
Posted by News Desk | ४ पुष २०७७, शनिबार २१:२५ |
भनिन्छ मान्छे प्राय : मतलवी र स्वार्थि हुन्छन् । आफ्नो काम वा मतलव चाहिएको वेला नजिक हुने, आफ्नो पन देखाउने अनि आफ्नो काम पूरा भए टाढिने वा मतलव नगर्ने हुन्छन् । कतिपय सम्वन्धहरु यस्ता हुन्छन् एकले चोट दिइरहन्छ र अर्काेले चोट सहिरहनुपर्ने हुन्छ । मैले देखेको र भोगेको जीवनमा पनि प्रायः आफ्ना भनिएका आफन्ती संगत गरेका र आफूसँगै रहेका, कुनै समय सँगै विताइरहेका केही मान्छेहरु पनि स्वार्थी र मतलमी नै देखिएका छन् । आफुले जति माया प्रेम सहयोग र शाहारा दिउ अफ्ठेरोमा साथ दिउ तर उनको लागि राम्रो बन्न सक्दैनौं ।
हामीले गरेको हरेक सही कुरामा पनि नराम्रो देख्न थाल्छन् । हामीले गरेको हरेक राम्रो काम, गुण बिर्सिन्छन् । चाहे हामी जति ठूलो गुण लगाम् । अह ! सम्झीदैनन्, भुलिदिन्छन् । अझै भन्ने गर्छन् तैले के गरिस् मेरो लागि । हाम्रो लागि जति नै मिल्ने साथी होस्, जव उसले अर्काे मान्छे भेट्छ नि उसले पहिलेका हरेक कुरा, उ सँग बिताएका हरेक पल हरेक क्षण विर्सिन्छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ?, उसले गरेका राम्रा काम उसले अप्ठ्यारोमा लगाएको गुण सवै कति सजिलैँ भुलिदिन्छन् । यो सोँच्दैन की मलाई कुनै समयमा साथ दिएको मेरो अप्ठ्यारोमा सहयोग गरेको मेरो एकलोपन दूर गरेको थियो भनेर । मेरो उ प्रतिको व्यवहारले उनको मन कति दुख्यो होला, कति पिडा भयो होला भनेर मान्छेको जातले कति सजिलै भुलिदिन्छ ।
सवै कुरामा कति वैगुनी मान्छेको जात, कती सजिलै एकलाई रुवाएर अर्काेमा खुसी खोज्न थाल्छ । यो सम्झिदैन की भोलिका दिनहरुमा सानो होस् या ठूलो कुनै वेला काम लाग्न सक्छ भनेर । कतिवेला कस्को आवश्यक पर्ने हो पत्तो हुदैन । भोलिका दिनहरुमा जुन साथीलाई अर्काे साथी पाएर नराम्रो व्यबहार गरिएको छ, त्यो पनि काम लाग्न सक्छ भनेर सजिलै सोँच्न सक्दैन्, उल्टै लागि परिरहेको हुन्छ । उसलाई कसरी नराम्रो बनाम्, कसरी तल खसाम, कसरी गिराउ, अझ सवैसँग नराम्रो बनाउ भनेर यति सव गर्दा उ आफ्नै नजरबाट गिरिरहेको हुन्छ, यस्ता व्यक्तिलाई क्षणिक खुसी त मिल्ला तर सधै खुसी हुन सक्दैनन् । जिन्दगी एकवारको हो, सवैसँग मिलेर खुलेर जिउनुहोस् । के थाहा भोलि मिल्ला–नमिल्ला भोलि कसले देखेको हुन्छ र ? हाम्रो आउने भोलिको दिन कस्तो हुन्छ भनेर ।
मलाई लाग्छ यहाँ मान्छे होइन काम प्यारो हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ प्यारो हुन्छ, मतलव प्यारो हुन्छ । त्यसैले त मान्छेहरु आफ्नो काम । स्वार्थ मतलवको लागि नजीक हुन्छन् आफ्नोपन देखाउछन् । जव आफ्नो काम पूरा हुन्छ, तव छेपारोले रङ फेरे झै आफ्नो रङ फेर्छन् । चिप्लो कुरा गर्ने मान्छेले सजिलै आफ्नो चिप्लो कुरामा फसाउन सक्छ र छेपारो भन्दा छिटो रङ पनि उसैले फेर्छ । जिन्दगीमा यदि साचो मान्छेको साथ मिल्यो भने साच्चै नै जिन्दगी सुन्दर हुन्छ, तर जीन्दगीमा गलत मान्छे आयो भने, मतलवी र स्वार्थी मान्छेसँग नजिक भयो भने हाम्रो सारा जीवन बर्बाद हुन पुग्छ । किनभने जो सही हुन्छ, असल मान्छे हुन्छ उसले कसैको हानी र नोक्सानी गर्न सक्दैन । तर, जो मतलवी हुन्छ जो स्वार्थी हुन्छ, उसले हाम्रो जीन्दगीमा दुःख, कष्ट र बाधा पु¥याउन भनेर आएको हुन्छ ।
यस्ता व्यक्तिसँग बचेर रहनु पर्छ ।
मतलवी मान्छेले बोल्ने र गर्ने कुरा फरक हुन्छ । तपाइहरुसँग ठुला ठुला कुरा गर्छ, तर जव गर्ने वेला आउछ त्यतीवेला केहीपनि गर्दैन, उसको कुरामा कुनै अर्थ हुदैन्, बोल्ने शब्द मात्र हुन्छ, उसलाई आफ्नो बारेमा मतलव छ, तपाईको बारेम मतलव हुदैन । उ त्यतिबेला मात्र तपाइको साथमा हुन्छ, जतिवेला उसलाई तपाइको आवश्यक हुन्छ । तपाईलाई भगवान नै बनाईदिन्छ कि तिमी मेरो यो काम गरिदेउ अथवा मेरो यो काममा सहयोग गरिदेउ, मेरो दुःखमा साथ देउ, उसलाई अरु कुनै कुराको मतलव हुदैन केवल तपाइलाइ ‘युज’ (प्रयोग) गर्न जानेको हुन्छ कि तपाइलाई कतिवेला कसरी ‘युज’ गर्नै भनेर उसलाई पूरा थाहा हुन्छ । आपूmले गरेको वाचा आफैले तोडिदिन्छ ।
मतलवी र स्वार्थी मान्छेले स्वार्थी र मतलवी मान्छेको सवैभन्दा ठुलो संकेत हो, वाचा पनि आफै गर्छ, कसम पनि आफै खान्छ र ति वाचा र कसम तोड्न पनि आफै अगाडी सर्छ । तरपनि उ आफ्नो गल्ती महसुस गर्न सक्दैन । यो मान्छे स्वार्थी हो, यो मान्छे मतलवी हो र यो मान्छे गलत हो, तपाइका लागि भनेर थाहा पाउन जरुरी छ, मतलवी मान्छे कैले पनि सच्चा हुदैन । जो मान्छे स्वार्थी हुन्छ, उ सधै झुटो बोल्छ । सत्य उसको मुखबाट निस्कदै निस्कदैन । उसलाई के लाग्छ, भने म सत्य बोले भने कसरी मान्छेको नजरमा राम्रो लाग्छु ? एउटासँग सत्य बोले भने अर्काेसँग सम्बन्ध विग्रिन्छ कि भन्ने सोच्छ । त्यसले यता पनि झुट, उता पनि झुट बोलेर सबैलाई आफ्नो झुटो भुमरीमा फसाइरहेको हुन्छ ।
उसलाई त यसरी, उसरी, त्यसरी, जसरी नी सबैलाई आफ्नो चिप्लो कुरामा फसाइरहनु छ । आफु राम्रो बन्नका लागि उसले बार–बार झुट बोल्छ । आफुले गरेको गल्तिको दोष अरुलाई दिन्छ । आफु खराब भएपनि दुनियाको नजरमा राम्रो बन्नका लागि उ सधै झुट बोल्छ, ताकी सबैले मलाई राम्रो सोचुन भनेर उ आफै योजना बनाउछ । आफैले ‘क्यान्सिल’ गर्छ फेरी आफै बदल्छ । यस्ता व्यक्ति तपाइको जिन्दगीमा तपाईको साथी पनि हुन सक्छ, तपाईको प्रेमी पनि हुनसक्छ या तपाइको आफन्ती पनि हुन सक्छ, जो कोही पनि हुनसक्छ । जव तपाइलाई उसको आवश्यकता हुन्छ नि, त्यतिबेला उ गायब हुन्छ या टाढिन खोज्छ र उसलाई चाहिएको बेला भरि तपाईको नजिक हुन्छ । किनकी उसले तपाईको बारेमा सोच्दै सोच्दैन । उ त मतलवी हो, उ त स्वार्थी हो । उसलाई थाहा हुन्छ की यो समयमा तपाईसँग रहदा अर्काे तिरको सम्बन्ध विग्रिन्छ वा तपाइलाई मद्दत गर्नुपर्छ, तपाइलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ । उसलाई केही फरक हुदैन ।
तपाइ खुसी रहनुहोस, दुःखी रहनुहोस, जीउदो हुनुहुन्छ वा मर्नुभयो उसलाई केही पनि प्रवाह हँुदैन, किनकी उ केवल आफ्नो लागि जिउँछ । भनिन्छ नी, उसका लागि सवै गरिन्छ तर, आफुलाई उसको खाचो पर्दा उ टाढिन्छ । त्यो मान्छे मतलवी हो स्वार्थी हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् । उसलाई इज्जत गर्न जान्दैन, अरुलाई इज्जत दिएर बोल्दैन , अनि अर्काे कुरा जो व्यक्ति खराव छ, जो मतलवी छ, झुटो छ , उसैलाई सधै अरुको सत्यता खोज्छ, खुसी खोज्छ र उसले चाहान्छ ‘अरु सबै खराब छन्, म मात्र असल छ,ु म मात्र ज्ञानी छु ।’
उसको जिन्दगीमा खुद आफ्नो बाहेक अरुको स्थान हुँदैन । बार–बार अरुलाई धोका दिन्छ, अरुको आखाँमा छारो हालेर हिड्न खोज्छ, मतलवी व्यक्ति । अरुको लागि केही गर्दैन्, जे गर्छ आफ्नो लागि मात्र गर्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र गर्छ, आफ्नो लागि के मा फाइदा छ, आफ्नो लागि के काममा स्वार्थ छ, त्यो मात्र देख्छ । उसलाई अरुको मतलव हुँदैन । कुनै विषयमा कोही रिसाउँछ रिसाओस, खुसाउछ खुसाओस, कुनै चासो हुदैन । उ यति मतलवी हुन्छ कि, उसलाई आफ्नो फाइदा वाहेक अरुको प्रवाह हुँदैन । हरेक कुरामा मुनाफा खोज्छ । हरेक कुरामा फाइदा खोज्छ । उसले यस्ता व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्ध जोड्छ, जो सँग आफूलाई फाइदा हुन्छ वा मतलव पूरा हुन्छ ।
जहाँ फाइदा लिन पाइन्छ, त्यहाँ मात्र उ अगाडी सर्छ र जहाँ दिनु पर्ने छ, त्यो ठाउँमा एकछकी टिक्दैन्, तर्केर हिड्छ या अनेक वाहाना बनाएर हुने नहँुने आरोप लगाएर टाढिने बाहाना खोजीरहन्छ । यस्ता व्यक्तिसँग बचेर रहनुहोस्, यस्ता व्यक्ति कहिलै आफ्नो हुँदैन । यदि त्यस्तै मतलवी र स्वार्थी मानिस तपाईको जीन्दगीमा छन्, भने तपाई थोरै सतर्क रहनुहोस्, किनकी त्यस्तो व्यक्तिले कहिलै पनि खुसी हुन दिदैन ।
जीवनमा खुसी हुन जरुरी छ सबैसँग मिठो बोल्न सिक्नुहोस् त भन्दिन्, तर सत्य बोल्न सिक्न चै जरुरी छ । कहिलै पनि कसैलाई नराम्रो शब्द नबोल्नुहोस् । कुनै शब्द यस्ता पनि हुन्छन्, जुन हामी कहिल्यै भुल्न सक्दैनौं, कुनै शब्द यस्ता हुन्छन् जो हाँस्दै गरेकोलाई रुवाउछन् र कुनै शब्द यस्तो हुन्छन्, रुदै गरेकालाई हसाउछन् । वास्तवमा सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली चिज ‘शब्द’ हो की जस्तो लाग्छ । किनभने जति नै धेरै पढेका व्यक्तिमा पनि बोल्ने ढंग हुँदैन । कतिबेला को सँग कस्तो शब्द बोल्नु पर्छ, थाहा हुदैन । यो शब्द सिक्न गाह्रो पनि छैन । हाम्रा केही आनी वानी र बलले पुग्छ र सबै भन्दा पहिले त आफ्नो सोँच बदल्न जरुरी हुन्छ । तपाइहरु शब्दको शक्तिलाई कहिले पनि सानो नसोच्नुहोला ।
यो शब्दको शक्ति धेरै नै ठूलो हुन्छ । यसलाई सानो र कमजोर सोच्नु भयो भने तपाईले भुुल गरिरहनु भएको छ । शब्दमा यति धेरै तागत छ की व्यक्ति आफ्नो शब्दको दमले लाखौ व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुन्छ । यति बलवान छ शब्द, जो व्यक्तिले आफ्नो जिन्दगीमा हरेस खाएको छ, त्यो व्यक्तिले शब्द कै कारण नयाँ जीवन पाउने सम्भावना हुन्छ । तपाइले आफुले बोल्ने आवाजलाई धेरै चर्काे पनि नगर्नुहोस र धेरै सानो पनि नगर्नुहोस्, र आफ्नो शब्दको सही र स्पष्टीकरणमा उच्चारण गर्नुहोस । दिललाई शब्दले मात्र छुदैन । ति शब्दका भावहरु भावनाले मन छुने हो । जवसम्म हाम्रो शब्दमा भावहरु आउदैन्, तवसम्म शब्दले मन छुदैन ।
त्यसैले शब्दमा भावना मिसाउन जरुरी हुन्छ । त्यही शब्द हो जुन राम्रोसँग बोल्दा र रिसाएर बोल्दा आकाश पातलको फरक हुन्छ । शैलीले नै त्यति धेरै फरक पार्छ । त्यसैले कहिले कसैलाई विनाकारण आरोप लगाएर नबोलनुहोस् । बिना गल्ती गर्दै नगरेको काममा सजाय नदिनुहोस्, पिडा नदिनुहोस, अनी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीमा आत्मविश्वास हुन जरुरी छ । यदि हामीसँग आत्मविश्वास छ त्यती नै शब्दमा पनि तागत हुन्छ । सानोलाई माया गरौं, ठुलोलाई आदर गरौं, झुट कसैले कसैसँग नबोलौं, झुट वोलेर कसैको मन जित्न आवश्यक छैन । साचो वोलेर आफैसँग जित्नुहोस, त्यही ठूलो कुरा हो ।
(लेखक दाङ तुलसीपुर निवासी हुन् ।)
Previousलुम्बिनी प्रदेशको गुरुयोजना बनाउन चीनसँग सहकार्य
Nextटिकटक बनाउने क्रममा लडेर एक युवक गम्भीर घाइते